ESDWAGOV - Somali language assistance - NEW
Gunooyinka bilaa shaqada ee safmarku way dhamaanayaan
Dalabkaaga ayuu saamayn karaa
Xataa hadii aad hesho shaqo ama aad joojiso dalabyaaada gunooyinka shaqada, fadlan akhri fariintan muhiimka ah.
Sharciga CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, Kaalmada Korona Faryas, Samato Bixinta, iyo Sugitaanka Dakhliga) iyo barnaamijyada kale ee federalku ee balaadhiyay gunooyinka ayaa la gaadhay wakhtigii ay dhamaanayeen. Todobaadka Sebteember 4 waxaa weeye todobaadka ugu danbeysa ee la bixinayo gunooyinka barnaamijyadan:
PUA (Pandemic Unemployment Assistance, Kaalmada Bilaa Shaqada Safmarka) – Dadka iskood u shaqaysta, dadka madaxa banaan, qandaraaslayaasha madaxa banaan iyo dadka kale ee aan u qalmin gunooyinka bilaa shaqada.
PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation, Gunada Bilaa Shaqada Xaalada Degdeg ah ee Safmarka) - Gunooyinka la kordhiyay marka ay kaa dhamaadaaan gunooyinka bilaa shaqada ee caadiga ah.
FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation, Gunada Bilaa Shaqada Safmarka Federalka) – $300 todobaadkii oo dalabyada u qalma ah.
Waxa aad iminka samaynayso
Waxa aad xaraysataa dalabkaaga todobaadlaha ah
Ilaa Sebteember 4, si aad u xaraysato todobaadada aad doonayso inaad hesho gunooyinka.
Waxa aad la socotaa fariimaha mustaqbalka ee anaka naga imanaya
Waxa aad naga heli kartaa fariimo aanu kuugu soo dirno eService xisaabtaada ah ama boosta. Ka jawaab wixii macluumaad ah ee lagaa dalbado. Xataa hadii aad joojiso dalabka ama aad hesho shaqo, waxa dhici karta in aanu weli kula soo xidhiidhno.
Waxa aad ka heshaa kaalmo baadhitaanka shaqada
WorkSource ayaa kaa caawin karta inaad hesho shaqadaada ama mihnadaada xigta. Qabocom si aad u bilawdo. QaybtaResources (Khayraadyada), isticmaal helaha WorkSource si aad u hesho xafiiska kuugu dhaw oo aad u aragto adeegyada aad ku heli karto maqal iyo muuqaal iyo si foolka fool ah.
Hadii aad weli u baahan tahay gunooyinka wixii ka danbeeya Sebteember 4, waxa aad:
Sii wadi kartaa xaraysashada dalabaadka todobaadkii hadii aad leedahay dalabaad bilaa shaqo oo shaqaynaya
Waxa aad qaadan kartaa todobaadyada aad heli karto dalabaadka bilaa shaqada ah ee caadiga ah.
Hadii aad isticmaasho eServices, waxa aad ogaan doontaa inaad haysato todobaadyo hadii aad aragto linkiga leh Waxa aad haysataa todobaad aad dalban kart.
Hadii aad taleefanka ku xarayso dalabyada todobaadkii, waxa aad maqli doontaa ikhtiyaarka xaraysashada dalabka todobaadkii.
Xasuuso: Hadii ay kuu hadhsan tahay todobaad dalabkaaga shaqada ee caadiga ah oo aad u qalanto todobaadadaas, waxa laguu soo diri doonaa xadiga gunada ee caadiga ah. Xadiga lama socdaan $300 ee dheeraadka ah todobaadkii ee FPUC.
Dalbo dalabka cusub
Qaabka ugu fudud ee loo dalban karo dalabaadka cusub waxa weeye iyada oo la isticmaalayoxisaabtaada eServices. Dooro Gunooyinka ay khusayso ee ku hoos jira Alerts (Jalaska).
Hadii aad doonayso inaad samaysato xisaab eServices, qabo esd.wa.gov/unemployment oo dooro Apply Online Now (Iminka Ku Dalbo Onleyn).
Hadii aanad dalban karin dalabkaaga cusub ee eServices, waxa aad kala hadashaa Xaruntaada Dalabaadka Bilaa Shaqada 800-318-6022. Kaalmo luuqad oo bilaash ah ayaad heleysaa. Xafiiska 711.
Dib u samayso dalabkaaga
hadii aanad ku xaraynin dalabyadaada wax ka yar shan todobaad, hadii aanad u baahnayn inaad dib u bilaabato. Sii wad gudbinta dalabaadkaaga todobaadka ugu danbeeya ee aad ka maqnaato.
Hadii aad ka maqnayd shan ama wax ka badan oo aad xaraysato, waxa aad dib u dalban kartaa dalabkaaga. Qaabka ugu fudud ee aad sidaa u samayn kartaa waa onleyn.
Waxa aad ka eegtaa faahfaahinta buuxda muuqaalka shaashada ee websaytkeena esd.wa.gov/unemployment/restart-your-claim.
Waxa aad sidoo kale dib ugu bilaabi kartaa dalabkaaga taleefan ahaan. Waxa aad la hadashaa Xarunta Dalabaadka Bilaa Shaqada todobaadka aad doonayso inaad dib u bilaabato dalabkaaga.
Waxa aanu halkan u joognaa inaanu kaa caawino
Waxa aanu ognahay in wakhtiga ay dhamaadaan gunooyinka bilaa shaqada federalku inuu noqon karo mid dhawakhaad leh. Dad badan ayaa la hadli doona Xarunteena Dalabka Bilaa Shaqada marka ay qabaan wax su'aalo ah. In taleefan lagu helo wakiiladeena ayaa aad u adkaanaysa.
Marka hore waxyaabahan tijaabi:
Macluumaadka ugu danbeeya waxa aad u qabataa esd.wa.gov/COVID-19 (Ingiriisi).
Waxa aad ka akhridaa sida loo dalbado gunooyinka esd.wa.gov/unemployment (Ingiriisi).
Sida loo codsado gunooyinka shaqo la'aanta
Waa maxay gunooyinka shaqo la'aantu?
Gunooyinka shaqo la'aanta ayaa ku siinaaya dakhli ku meel gaar ah markaad ku waydo shaqadaada sabab aadan khaladka adigu lahayn. Lacagta ayaa badalaysa qaar kamid ah dakhliga aad lumisay waxayna kaa caawinaysaa bixinta qarashaadka intaad shaqo cusub helayso. Gunooyinka ayaa ka yimaada canshuurihii laga jaray mushaarkii uu ku siin jiray qofkii aad horay ugu shaqayn jirtay. Gunooyinka laguma salaynaayo baahidaada dhaqaale—kaliya waxaa lagu salaynayaa inaad dhawaan lumisay shaqadaada.
Oonleen ku codso (Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)
Qaabka ugu fiican ee ugu dhakhsaha badan waa inaad oonleen ku codsato. Codsiga oonleenka ah ayaa kaliya lagu heli karaa af Ingiriis iyo Isbaanish. Kahor intaadan codsan, hubi inaad u qalanto oo baro waxa aad u baahan tahay inaad codsato:
Haddii aadan ahayn Muwaadin Mareykan ah, waxaad wali codsan kartaa dheefaha shaqo la'aanta. Wax badan ka baro muwaadinnimada iyo xuquuqdaada sharciyeed ee aad u leedahay inaad shaqeyso.
Ogoow xog badan oo ku saabsan waxa aan ku weydiisaneyno markaad codsaneyso gunnada shaqo la'aanta khadka tooska ah.
U adeegsotilmaantan si aad wax badan uga barato eServices, Webseetka aaxda Amniga Shaqada (Employment Security Department) ee codsiga gunnooyinka shaqo la'aanta, gudbinta sheegashooyinka toddobaadlaha ah iyo helitaanka macluumaadka ku saabsan gunnooyinka.
Haddii aad heshay " Determination Letter " (Warqad Go'aamin) oon kuusoo dirnay aadana nagu raacsanayn, habka ugu fudud ee rafcaan looga qaato waa adeega khadka internetka ee eServices. ama waxaad isticmaali kartaa Benefits Appeal form (Foomka rafcaanka Gunnooyinka).
Si aad u hesho dheefta lacagta ah, waa inaad raadsataa shaqo. Waxbadan ka baro shuruudaha shaqo raadinta.
Fadlan booqo bogga Ku laabashada shaqada oo laga helayo ilo macluumaad kala duwan oo loogu talagalay shaqaalaha.
Bogga Diidmada shaqada ayaa ka jawaabaya su'aalaha ku saabsan shaqaalaha aan ku laaban shaqadooda.
Hadda oonleen ku codso
(Ingiriis iyo Isbaanish kaliya)
Kucodso khadka taleefanka (turjumaano ayaa la heli karaa)
Waxaad ku codsan kartaa taleefanka. Mudada la sugaayo wicitaanka ayaa hadda aad u dheer ayadoo dad aad u badan nasoo wacayaan si ay codsi usoo gudbiyaan sabab la xariirta aafada COVID-19. Waxaan ku dadaalaynaa inaan ku caawino aana kuu diyaarino turjumaanada luuqada, marka haddii aad doonayso inaad khadka taleefanka ku codsato, tilmaamahaan ayaa ku caawin kara.
Xili hore ama danbe nasoo wac
Inaad nasoo wacdo xili hore ama danbe waxay kordhinaysaa fursadahaaga helitaanka qof taleefanka kaa qabta (Saacadaa iyo xogta xarunta sheegashooyinka).
Ka jawaab taleefanka
Waxaa suuragal ah inaan kusoo wacno! Magaceenu kamasoo muuqanaayo wicitaanka. Haddii aadan qaban wicitaankeena, waa inaad wicitaanka nagusoo celisaa, taasoo waqti dheeraad ah ku daraysa mudada codsigaaga laga shaqaynaayo.
Si aad taleefanka ugu codsato, wac 800-318-6022.